Harry Maguire oo gaaray xarunta tababarka Carrington si uu u dhammaystiro heshiiska uu ugu biirayo Manchester United – Gool FM
Harry Maguire oo gaaray xarunta tababarka Carrington si uu u dhammaystiro heshiiska uu ugu biirayo Manchester United
(Manchester) 03 Agoosto 2019. Sida wararku ay sheegayaan Harry Maguire ayaa gaaray xarunta tababarka Manchester United si uu u dhammaystiro heshiiska rikoorka ah oo uu ugu wareegayo kooxda ka arrimisa garoonka Old Traffrod.
Daafacan reer England ayaa halkaas tijaabada caafimaad ku mari doona isla markaana saxiixi doona qandaraaska cusub ee uu ugu biirayo Man United, kaddib markii Red Devils ay saxiixiisa heshiis kala gaartay Naadiga Leicester City.
Inkastoo ay Manchester United ku raad-joogtay saxiixiisa xagaagan oo dhan haddana kooxda Leicester City ayay heshiis 85 milyan ah la gaareen si ay la wareegaan Maguire, lacagtaasoo ay ku heshiiyeen labada kooxood Jimcihii shalay, waxaana Harry Maguire uu noqonayaa daafaca ugu qaalisan abid.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahan Harry Maguire ayaa maanta soo gaaray xarunta tababarka kooxda Manchester United ee Carrington si uu halkaas tijaabada caafimaad ugu maro ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin.
Baabuur ay ku qoran tahay Triple S Sports & Entertainment Company oo ah shirkadda wakiilka u ah Harry Maguire ayaa la sawiray isagoo sii galaya xarunta tababarka Man United ee Carrington, waxaana la rumaysan yahay inuu Harry Maguire ku dhex jiray gaarigaas.
Macallin Brendan Rodgers ayaana horay u xaqiijiyey in labada kooxood ee Leicester City iyo Man United ay ka heshiiyeen lacagta laacibkan.
Saacadaha soo aaddan ayaa la filayaa in Manchester United ay si rasmi ah u shaacisay inay Leicester City kala soo wareegtay Harry Maguire, isla markaana ay si rasmi ah u soo bandhigto.